အမြဲတွေ့ရှိနိုင်သောမေးခွန်း - ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောဘဝအတွက် ဗောဓိ တရားအားထုတ်ခြင်း
တရားအားထုတ်ပွားများခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ?
တရားအားထုတ်ပွားများခြင်းဆိုသည်မှာ မိမိ၏ စိတ်နှင့်နှလုံးသားကို ရှာဖွေခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ခြင်းဟု ခေါ်ဆို နိုင်သော မိမိကိုယ်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ တရားအားထုတ်ပွားများခြင်းသည် မိမိကိုယ်ကို အလေးအနက် ဆင်ခြင်သတိပြုမှုနှင့် စိတ်ဖြန့်ကျက်ခြင်းကို မြင့်မားလာစေပါသည်။ မိမိကိုယ်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ထားသောစိတ်နှလုံးသည် ပိုမိုစင်ကြယ်လာပြီး ငြိမ်းချမ်းသည့်ခံစားမှုကို ပိုမိုရရှိလာစေပါသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာသည်လည်း ပိုမို ကျန်းမာသန်စွမ်းလာပြီး ပေါ့ပါးလာပါသည်။ .
တရားအားထုတ်ပွားများခြင်းလေ့ကျင့်မှုသာလျင် အကြွင်းမဲ့ မိမိကိုယ်ကို မိမိ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းဟူ သော လွဲမှားသည့်ယုံကြည်မှုတစ်ခုရှိနေပါသည်။ တချို့သောသူများသည် တရားအားထုတ်ပွားများခြင်းမပြုလုပ် သော်လည်း မိမိကိုယ်မိမိ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းကို ရရှိစေသည်ဟု ဆိုကြသည်။ အမှန်တကယ် ကျင့်ကြံ အား ထုတ်သူတိုင်းသည် တင်ပျဉ်ခွေ ထိုင်ခြင်းမရှိဘဲနှင့်လည်း တရားအားထုတ်ပွားများခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ကြ သည်။ နေ့စဉ် ပုံမှန်ပြုလုပ်လေ့ရှိသော ထမင်းစားခြင်းနှင့် အလုပ်လုပ်ခြင်း တို့နှင့်လည်းဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ သာမန် အပြုအမူများကို ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း သတိဖြင့်နေထိုင်ခြင်းသည် မိမိကိုယ်ကို ပြုစုပျိုး ထောင် အနှစ်သာရပင် ဖြစ်သည်။.
တရားအားထုတ်ပွားများခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့သော သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနများ ပြုလုပ်ထားသနည်း။ ?
လူအများစုသည် ၄င်းတို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ပတ်သက်ပြီး မှားယွင်းသည့် အယူအဆများ ရှိနေကြသည်။ ရုပ် နှင့် နာမ် နှစ်ပါးရှိသည်ကို မေ့လျော့နေကြပြီး ရုပ် တစ်ခုတည်းသာ ရှိသည်ဟု အထင်မှားနေကြသည်။ ထိုသို့သော အထင်မှားမှုများကြောင့် ရုပ် တစ်ခုတည်းကိုသာ ကျန်းမာအောင်၊ အာဟာရ ရရှိအောင် နေထိုင်နေ ကြပြီး နာမ်ကို မည်သို့ကျန်းမာကြံ့ခိုင်အောင်ထားရမည်ဆိုသည်ကိုမူ မသိကြပေ။ ထိုအရာကပင် များစွာ သော ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့မှုများကို ဖြစ်ပွားစေသည်။ .
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှုများသည် ကိုယ်ခန္ဓာဖျားနာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး စိတ်ဝိဥာဉ်ကပင် ကိုယ်ခန္ဓာ၏ စေရာဖြစ်သည်ဟု သတိပြုမိလာကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အနိစ္စမမြဲဆိုသည့်အတိုင်း တစ်နေ့တွင် သေကြရမည်ဖြစ်ပြီး လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ဆိုသည့် အကုသိုလ်တရား သုံးပါးကို ရှောင်ရှား၍ မရနိုင်ပေ။ အဆိုပါ အကုသိုလ်တရား သုံးပါးကပင် ကိုယ်ခန္ဓာ မကျန်းမာခြင်းကို ဖြစ်ပွားစေသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာ မကျန်းမာခြင်းကို ကုသပါက ချက်ချင်း ပျောက်ကင်းသွားနိုင်သော်လည်း ပြဿနာ၏အရင်းအမြစ်မှာ ဆက်လက်ကျန်ရှိနေမည် ဖြစ်သည်။ .
သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ လူတို့သည်စိတ်ကျန်းမာပါက ခန္ဓာကိုယ်မှကောင်းမွန်သည့် ဟော်မုန်းများ၊ အင်ဇိုင်းဓာတ်များနှင့်ဒြပ်ပေါင်းများကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ထိုအရာများက သွေးဖိအားကိုလျော့နည်းစေပြီး နဗ်ကြောဆဲလ်(နျူယွန်)များကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးသည်။ အခြား တစ်ဖက်တွင်မူ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့် ဝမ်းနည်းခြင်းတို့သည် ကိုယ်ခန္ဓာ အတွင်းပိုင်း လုပ်ဆောင် မှုများကို ကစဉ့်ကလျားဖြစ်စေပြီး ဖျားနာခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ .
မိမိကိုယ်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းသည် ပူလောင်သော စိတ်ကိုတားဆီးကာကွယ်နိုင်ပြီး အတွင်းစိတ်ကို စင်ကြယ် သန့်ရှင်းစေပါသည်။ စိတ်သည် သောကကင်းဝေးနေပါက ကိုယ်ခန္ဓာရှိစွမ်းအင်တို့သည် ချောမွေ့စွာ စီးဆင်းနေမည် ဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်ချောမွေ့စွာစီးဆင်းနေပါက ကိုယ်ခန္ဓာသည်လည်း ကျန်းမာမည်ဖြစ်သည်။ ဖျားနာမှုများ ကင်းစင်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓာသည်လည်း ခွန်အားများ တိုးပွားရုံတင်မကဘဲ အတွေးအမြင်ကိုလည်း ကွန့်မြူးစေပါသည်။ စင်ကြယ်သည့် အတွေးအမြင်သည် မကောင်းသည့် စိတ်အာရုံများကို ဖယ်ထုတ်နိုင်ပြီး သန့်စင်သော အကြောင်းအရာများကို တွေးခေါ်စေနိုင်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အာရုံစိုက်မှုသည်လည်း တိုးတက်လာသည်။ ထို့ပြင် အသစ်အသစ်သော ဥာဏ်ပညာများနှင့် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကျန်းမာရေး၊ အောင်မြင်ရေးနှင့် မျှော်လင့်ချက်များ ပြည့်ဝလာစေရေး စသည့်များစွာသောစွမ်းရည်များကို နားလည်သဘောပေါက်လာမှုတို့အား တိုးပွားလာစေမည် ဖြစ်သည်။ .
မည်သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များက မိမိကိုယ်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း လေ့ကျင့်မှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်သနည်း။ ?
မိမိကိုယ်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းကို မည်သူမဆိုလေ့ကျင့်နိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၏ ခံယူချက်ချင်း ကွာခြားသော်လည်း ပင်ကိုဥာဏ်ရည်မှာ အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်မိမိ အလွန်အမင်း ပညာတတ်ပြီဟု မှတ်ယူထားသော အချို့သူများသည် ၄င်းတို့ ဆည်းပူးခဲ့သော ပညာရေး နယ်ပယ်က ရရှိခဲ့သည့် အသိပညာဖြင့် ကန့်သတ်ခြင်းခံထားကြရသည်။ ၄င်းတို့၏အတွေးအခေါ်အပေါ်တွင်ရှိနေသော ပိုင်းခြားသိမြင်မှုနှင့် ဆင်ခြင်တုံတရားတိုးတက်လာမှုတို့အား တာဆီးပိတ်ပင်ထားဆဲဖြစ်သည့်ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် နားလည်သဘောပေါက်နိုင်စွမ်းမရှိကြချေ။ တရားအားထုတ်ပွားများခြင်းသည် အမျိုးမျိုးသောအသိပညာနှင့် အတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။ ကမ္မဌာန်းထိုင်ခြင်းသည် အကျိုးမရှိသော အကြောင်းအရာများကို ဖယ်ထုတ်နိုင်ပြီး လက်ရှိတွေ့ကြုံနေရသည့် ဘဝ၏ အမှန်တရားများကို ရရှိနိုင်စေသည်။ .
မိမိ၏သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်နေသူဖြစ်ပြီး တရားအားထုတ်ပွားများခြင်းသည် မိမိအား မည်ကဲ့သို့ အကျိုးကျေးဇူး ရရှိမည်နည်း။ ?
ရိုးရှင်းသည့် အမှန်တရားတစ်ခုက ဘဝဆိုသည်မှာ ပြောင်းလဲခြင်းနိယာမ တစ်ခုဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး မပြောင်းလဲ ဘဲကျန်ရှိနေသည့်အရာမှာ ပြောင်းလဲခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့် အချို့သောအရာတို့သည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည့် သဘာဝနိယာမတရားများဖြစ်ကြသည်။ ရှေးအခါက တရုတ်လူမျိုးတို့သည် လူ့ဘဝဆို သည်မှာ ပျော်ရွှင်မှုနှင့် ဝမ်းနည်းမှု နှစ်မျိုးစလုံးကို အချိန်တိုလေးအတွင်း သာယာကြည်နူးရခြင်းဟု ယုံကြည်ကြ သည်။ ဘဝကိုအခက်အခဲများစွာဖြင့် ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရသူများရှိနေသကဲ့သို့ ဘဝကိုအခက်အခဲမရှိ သာယာကြည်နူးစွာ ဖြတ်သန်းနေကြသည့် တချို့သောသူများသည်လည်း ခါးသည်းမှုဒဏ်ကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါဖြစ်စေ ခံစားကြရပေသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိကိုယ်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းသည် ကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲများ အားလုံးကိုဖြေရှင်းရာတွင် အထောက်အကူပြုမည့်လက်နက်တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် စိတ်ကို ပညာဥာဏ်ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစေခြင်း ဖြစ်သည်။ .
မိမိသည် ဘဝတွင် အခက်အခဲများစွာကို ရင်ဆိုင်နေရပြီး တရားအားထုတ် ပွားများခြင်းသည် ၄င်းအခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါမည်လား။ ?
အရှင်းဆုံးပြောရလျှင် လူတစ်ဦးတွင် အသက်နှင့် ကံကြမ္မာ ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ :
• အသက်သည် လူသားတို့၏ဆဋ္ဌမအာရုံဖြစ်သည့် မွေးရာပါသတိဖြင့်တည်ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။.
• ကံကြမ္မာသည် သတိမထားလိုက်မိသည့် အချိန်တွင် အရာအားလုံးကို ပြောင်းလဲပြစ်ခြင်း ဖြစ်သည်။.
စင်ကြယ်သန့်ရှင်းမှု ပွားများအားထုတ်ခြင်းသည် သင်၏ ဆဋ္ဌမအာရုံကို သန့်စင်စေပြီး မှန်ကန်သည့် လမ်းစဉ် ဖြစ်သော မဇ္ဈိမပဋိပတာဟူသည့် အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ကို လမ်းပြခေါ်ဆောင်ကာ ကောင်းမွန်သောဘဝသို့ ပြောင်းလဲနိုင်စေမည် ဖြစ်သည်။ .
ကံကြမ္မာဆိုသည်မှာ အကောင်းအဆိုး ဒွန်တွဲလျက်ရှိသည့် ကုသိုလ်ကံ ပင်ဖြစ်သည်။ တရားအားထုတ်ပွားများ ခြင်းသည် သင်၏မကောင်းသော ကုသိုလ်ကံကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေကာ ကောင်းသောကုသိုလ်ကံကို ဖြစ်ပေါ် စေပြီး သင့်ဘဝအတွက် ကောင်းမွန်သော ပြောင်းလဲမှုများကို ယူဆောင်ပေးနိုင်သည်။ အကျဉ်းချုပ် ပြောရလျှင် တရားအားထုတ်ပွားများခြင်းသည် ရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားနိုင်သည့် စွမ်းရည်ကို ရရှိ စေပါသည်။.
ဗောဓိ တရားအားထုတ် ပွားများခြင်း၏ ထူးခြားမှုဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ?
ဗောဓိ တရားအားထုတ်ပွားများခြင်း နည်းလမ်းများသည် တရားပြ ဆရာတော် ဂျင်ဗောဓိက ဆယ်စုနှစ် များစွာ ၄င်းကိုယ်တိုင် ကျင့်ကြံအားထုတ် စမ်းသပ်ပြုစုခဲ့သော တရားအားထုတ် ပွားများခြင်း နည်းလမ်းများဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ တရားအားထုတ်ပွားများခြင်းနည်းလမ်းများမှာ စိတ်ကိုစင်ကြယ်စွာထားခြင်းကိုအခြေခံပြီး အောက်ပါ အချက်များ ပါဝင်ပါသည်- :
ဗောဓိတရား အားထုတ်ပွားများခြင်းနည်းလမ်းများကို ကျား/မ၊အသက်အရွယ်မရွေးလွယ်ကူစွာ ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်သည်။ ယဉ်ကျေးမှု၊ စီးပွားရေး၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုနှင့် ဘာသာစကား တို့အပေါ် အခြေခံ၍ ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ထက်သန်သည့် စိတ်ရှိပါက တရားအားထုတ်ပွားများခြင်း နည်းလမ်းများကို အချိန်တိုအတွင်း လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လာနိုင်ပါသည်။ .
(2) ရလဒ်ကောင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
ဗောဓိတရားအားထုတ်ကျင့်ကြံသူများသည် ၄င်းတို့၏လက်ရှိဘဝတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချမ်းသာသုခများကိုရရှိရန် လေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌ စိတ်ဝိဥာဉ်နှင့် စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းမွန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ပြင်ပခန္ဓာကိုယ်သည်လည်း ကျန်းမာ သန်စွန်းနေမည် ဖြစ်သည်။ .
(3) လက်ရှိဘဝအား အဓိပ္ပာယ် ပြည့်ဝစေခြင်း
ဗောဓိ တရားအားထုတ် ပွားများခြင်း နည်းလမ်းများသည် ကောင်းမွန်သော လူနေမှုဘဝကို ပြသပေးသည့် နည်းလမ်းများ ဖြစ်သည်။ သင်တန်းသားများသည် စိတ်နှလုံးကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့် ဥာဏ်အမြင် ပွင့်လင်းစေ ခြင်းတို့ကို လေ့လာသင်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့ တရားအားထုတ် ပွားများခြင်းသည် ကောင်းကျိုးချမ်းသာ သို့မဟုတ် ကောင်းမှုကုသိုလ်ကို နက်နက်နဲနဲ ရရှိစေပါသည်။ .
ဗောဓိ တရားအားထုတ် ပွားများခြင်းမှတဆင့် မိမိအတွက် မည်သို့သော အကျိုးရလဒ်များ ရရှိစေသနည်း။ ?
ဗောဓိတရားအားထုတ်ပွားများခြင်းနည်းလမ်းများသည် ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် စိတ်ကို ကောင်းကျိုးများ ရရှိစေပါသည်။ .
A. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများမှာ- :
(1) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေနှင့် ကိုယ်အလေးချိန် အပါအဝင် ကိုယ်ခန္ဓာအချိုးအစားကို ထိန်းညှိပေးခြင်း
(2) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနှောင့်အယှက်နှင့် မကောင်းသော စိတ်အညစ်အကြေးများ ကင်းစင်စေခြင်း
(3) တွေ့ရှိချက်တစ်ခုအရ ကျင့်ကြံအားထုတ်သူတို့သည် အစားအစာမသုံးဆောင်ခြင်း (သို့) စားလိုစိတ်မရှိရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်းမရှိသည့်တိုင်အောင် ကိုယ်ခန္ဓာသည် သွက်လက်တက်ကြွပြီး စွမ်းအင်ပြည့်ဝနေခြင်း၊ ကျန်းမာပြီး ရုပ်ခန္ဓာနှင့် စိတ်ဝိဥာဉ်ကို သူ့အလိုလို ပြန်လည် ထိန်းညှိပေးနိုင်သည့် ဤထူးဆန်းသည့် ဖြစ်စဉ်ကို “အစာခြိုးခြံကျင့်စဉ် ” ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်။
B. စိတ်ဝိဥာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများမှာ-
(1) ခန္တီပါရမီပြည့်ဝလာခြင်းနှင့် ဥာဏ်စွမ်းအား မြင့်မားလာခြင်း
(2) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လျင်မြန်သွက်လက်ခြင်းနှင့် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း
(3)စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုနှင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းစေခြင်း
(4) စိတ်နှလုံးပွင့်လင်းကာ တစ်ပါးသူအားကူညီရခြင်းအပေါ် များစွာစိတ်အားထက်သန်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း
ဗောဓိတရားအားထုတ်ပွားများခြင်းနည်းလမ်းများကို ကျင့်ကြံရာတွင် မည်သို့သောအခက်အခဲများ ရှိနိုင်သနည်း။ ?
တရားအားထုတ် ပွားများခြင်းသည် သဘာဝတရားနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ “သဘာဝတရား”ကို ထိန်းညခြင်းဖြစ်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ အခက်အခဲမရှိချေ။ .
တရားအားထုတ်နေစဉ်အတွင်း အေးရာမှအလွန်ပူသည်အထိ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေအမျိုးမျိုးကို လေ့ကျင့် ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်များသည် လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်မတူညီနိုင်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူနှစ်ဦးသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများမှာ မတူညီနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အဆိုပါဖြစ်စဉ်များသည် အန္တရာယ်ကင်းစေပါသည်။ တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် အထက်ဖော်ပြပါ ဖြစ်စဉ်များနှင့်မတွေ့ကြုံသော်လည်း တရားအားထုတ်ပွားများခြင်းမှတဆင့် ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိကြသည်။ ဤနေရာတွင် အမှန်တကယ်မတည်ရှိသည့် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုများလည်းမရှိပါ။ တရားအားထုတ်သူများသည် ၄င်းတို့၏ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို အတားအဆီး ဖြစ်စေမည့် စိတ်စွဲလမ်းမှု(ဥပါဒါန်)များ မရှိသင့်ပါ။ .
ရလဒ်ပေါ်ထွက်လာရန် မည်မျှကြာအောင် စောင့်ရမည်နည်း။ ?
ဗောဓိ တရားအားထုတ် ပွားများခြင်းသည် သင်ယူလေ့လာရန် လွယ်ကူသောကြောင့် အားထုတ်သူ အများစုမှာ ရက်သတ္တနှစ်ပတ် ကြာပြီးပါက သိသာသည့်ရလဒ်များ ထွက်ပေါ်လေ့ရှိပါသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အခြေအနေများမှာ မတူညီနိုင်သောကြောင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၏ ရလဒ်များသည်လည်း ကွဲပြားခြားနား နိုင်ပါသည်။ တရားအားထုတ်မှုကို ပိုမိုအာရုံစိုက်လေလေ အကျိုးကျေးဇူးများလေလေ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ကောင်းမွန်သည့်ရလဒ်များကိုလျင်မြန်စွာရရှိလိုပါက အပြုသဘောဆောင်ပြီးကောင်းမွန်သည့် အခြေခံ နည်းလမ်းများဖြင့် တည်ထောင်ထားသော ကျွန်ုပ်တို့၏ဗောဓိတရားအားထုတ်ရေးစခန်းများမှ စခန်းတစ်ခုသို့ လာရောက် လေ့ကျင့်စေလိုပါသည်။ အလားတူပင် သင့်အနေဖြင့် မဟာဥာဏ်အလင်း ပွားများအားထုတ်ခြင်းနှင့် စင်ကြယ်သန့်ရှင်းမှု ပွားများအားထုတ်ခြင်းတို့ကို တစ်ရက်လျှင် တစ်ကြိမ်လေ့ကျင့်ရမည် ဖြစ်သည်။ အထက်ပါ အချက်များကို လိုက်နာပါက အမြင့်ဆုံးသော အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဗောဓိတရားအားထုတ်ခြင်းနည်းလမ်းများကို မိမိ၏နေအိမ်မှတဆင့် ဆက်သွယ်လေ့ကျင့်နိုင်ပါသလား။ ?
အများအားဖြင့် ဗောဓိ တရားအားထုတ်စခန်းတွင် လာရောက် ကျင့်ကြံအားထုတ်သူများသည် ကောင်းမွန်သော ရလဒ်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကောင်းမွန်သော အခြေခံသင်ကြားမှုများကို လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးရုံသာ မကဘဲ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကိုလည်း ကြီးမားစွာအထောက်အကူပြုစေပါသည်။ ဗောဓိ တရားအားထုတ် စခန်းသို့ လာရောက်ကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းမရှိသူများသည်လည်း တရားအားထုတ်သည့်နည်းစနစ်များကို မှန်ကန်စွာ လိုက်နာပါက ထူးခြားသော ရလဒ်များ ထွက်ပေါ်လာမည် ဖြစ်သည်။ ဗောဓိ တရားအားထုတ်စခန်း အနေဖြင့် စခန်းသို့ လာရောက်လေ့ကျင့်မှု မပြုလုပ်နိုင်ကြသော တရားအားထုတ်သူများအတွက် အသံဖိုင် များဖြင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ အထောက်အကူပြု အသံဖိုင်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ် ပေးချေရန် ပြည်တွင်းဗောဓိတရားအားထုတ်စခန်းသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ သင်တန်းသားများအနေဖြင့် ဆရာ/ဆရာမများထံမှ လမ်းညွှန်မှုများကို စာတိုက်မှဖြစ်စေ၊ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အီးမေးလ်ဖြင့် ဖြစ်စေ ရယူနိုင်ပါသည် (ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ “ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း” ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ရှာဖွေစေလိုပါသည်)။
ဗောဓိ တရားအားထုတ်စခန်းတွင် တရားအားထုတ် လေ့ကျင့်မှုအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အချိန်သတ်မှတ် ချက်များ ရှိပါသလား။ ?
တရားအားထုတ်သူများသည် နေ့ဖြစ်စေ၊ ညဖြစ်စေ အချိန်တိုင်းတွင် တရားအားထုတ်နိုင်ပါသည်။ အသင့်တော် ဆုံး၏ အချိန်သည် အစားစားပြီးနာရီဝက်အကြာတွင် ကျင့်ကြံအားထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့် တရား အားထုတ်နိုင်သလောက်၊ ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုတွင် ပျော်မွေ့သလောက်ပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။ တစ်နာရီခွဲကြာ တရားအားထုတ်ရာတွင် မှန်ကန်သည့်နည်းလမ်းကိုသာ အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး (သင်၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအပေါ် မူတည်၍) တစ်နာရီခွဲကြာအားထုတ်တိုင်း အချိန်အနည်းငယ်ပိုကာအားထုတ်နိုင်ပါသည်။ နေ့စဉ်မှန်ကန်စွာ လေ့ကျင့်သွားပါက သင့်အနေဖြင့် အကျိုးရှိလာမည်မှာ မလွဲဧကန် ဖြစ်သည်။ .
မိမိသည် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အလုပ်လုပ်ရသူဖြစ်ပြီး တရားအားထုတ်ပွားများရန် အချိန်မရှိပါက မည်သို့ လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။ ?
တရားအားထုတ်ပွားများခြင်းသည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစိတ်အနားယူမှုပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းကို ပပျောက်လန်းဆန်းစေပြီး နှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အလုပ်ခွင်တွင် နာရီ ပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်သူမည်သူကိုမဆို တရားအားထုတ်ပွားများရန် မိမိတို့၏ ညအိပ်ချိန်ထဲမှ တစ်နာရီဖယ် ထားရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် သင်နေ့စဉ်အသုံးပြုနေသော စွမ်းအင်ပမာဏကို မြင့်တက်လာစေမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သောအခက်အခဲများကိုလည်း ဖြေရှင်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်များ ရရှိလာမည် ဖြစ်ပါသည်။ .
တရားအားထုတ်ပွားများရန် အသင့်တော်ဆုံးသော ကိုယ်ဟန်အနေအထားမှာ အဘယ်နည်း။ ?
တင်ပျဉ်ခွေထိုင်ခြင်းသည်သာ တရားအားထုတ် ပွားများခြင်း၏ အဓိကနည်းလမ်းဟု မမှတ်ယူသင့်သော်လည်း တရားအားထုတ်ကျင့်ကြံရာတွင် မိမိကိုယ်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း၏ အဓိက နည်းလမ်းဖြစ်သော ခန္ဓာကိုယ်နှင့် စိတ်အား ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းသည်သာ အဓိကျသည်။ အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် တင်ပျဉ်ခွေမထိုင်ပါက သင်၏
ခန္ဓာကိုယ်နှင့် စိတ်သည် တစ်သားတည်းမကျနိုင်ဘဲ အလေးအနက် သတိပြုမှုနှင့် အချိတ်အဆက်မိရန် ခက်ခဲ နေမည်ဖြစ်သည်။ .
တင်ပျဉ်ခွေပုံစံဖြင့် တရားအားထုတ်ပွားများခြင်းသည် သင်၏စိတ်စွမ်းအားကို တိုးပွားနိုင်ရေးအတွက် အကောင်း ဆုံးသော ကိုယ်ဟန်အနေအထားဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့်သက်သောင့်သက်သာမရှိခြင်း၊ နာကျင် ခြင်း၊ ထုံခြင်း စသည့် အခြေအနေများကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါက သင်၏ စွမ်းအင်နှင့်အာရုံစိုက်မှုများ ပျောက်ဆုံးမှု မရှိတော့ဘဲ အခက်အခဲနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ တင်ပျဉ်ခွေခြင်းသည် အကောင်းဆုံး ကိုယ်ဟန်အနေအထား ဖြစ်သည့်အတွက် အဆိုပါအနေအထားကို သတိမမူဘဲမနေသင့်ပါ။ ထိုအနေအထားဖြင့် အကြိမ်အရေအတွက် အနည်းငယ် ထိုင်ပြီးပါက တဖြည်းဖြည်း လွယ်ကူသွားမည် ဖြစ်သည်။ .
တရားအားထုတ်ပွားများနေစဉ် နာကျင်ခံစားရပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ ?
တရားအားထုတ် ပွားများခြင်းကို စတင်လေ့ကျင့်စဉ် အမျိုးမျိုးသော နာကျင်မှုနှင့် စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်မှုများကို ခံစားရလေ့ရှိပြီး ထိုအခြေအနေမှ လွတ်မြောက်ရန်လည်း လွန်စွာမှ (အလွန်) ကြာမြင့်သည်ဟု ခံစားရတတ်ပါ သည်။ လေ့ကျင့်ခြင်းသည် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းအားမြင့်တက်စေခြင်းဖြစ်သောကြောင့်တရားအား ထုတ်နေစဉ် စိတ်နှလုံးကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားရှိရန် လွန်စွာအရေးကြီးပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် အဆိုပါခက်ခဲသည့် အခြေအနေများကို တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါက စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းမှု၏ အနှစ်သာရကို ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ နာကျင်ခံစားမှုတို့ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် ခက်ခဲပြီး လေ့ကျင့်မှသာလျင် အမှန်တကယ်နားလည်သဘောပေါက်လာမည်ဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်ဘဝဖြတ်သန်းမှုတို့အတွက်ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်သည့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများလည်း ဖြစ်ထွန်းလာစေမည် ဖြစ်ပါသည်။ .
တရားအားထုတ်ပွားများနေစဉ် ခံတွင်းမှ ရုတ်တရက်တံတွေးထွက်ခြင်းသည် မည်သည့်အကြောင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်နည်း။ ?
တရားအားထုတ်ပွားများနေစဉ် ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်သည် မြင့်မားလာပြီး ချွေးထွက်လွယ်သည်။ အကြောင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းသွေးလည်ပတ်မှုမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ တရားအားထုတ် ပွားများနေစဉ် လျှာသည် အာခေါင်နှင့်ဆန့်ကျင်စွာတည်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပြီး အချိန်ကြာလာသောအခါတံတွေးဂလင်းများကို လှုံ့ဆော်ပေး ခြင်းကြောင့် တံတွေးထွက်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အကြင်သူသည် မကြာမကြာ တံတွေးကို ဖြည်းညင်းစွာ မျိုချနိုင်သည်။.
မိမိကိုယ်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ရာတွင် သတ်သတ်လွတ်စားရန် လိုအပ်ပါသလား။ ?
စိတ်နှလုံးကို ငြိမ်းချမ်းစွာကျင့်ကြံအားထုတ်မှုသည် မိမိကိုယ်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း၏ အဓိကအခန်းကဏ္ဍ ဖြစ် သည်။ ၄င်းသည် သတ်သတ်လွတ်စားခြင်းထက်ပင် ပိုမိုအရေးကြီးသည်။ အစားအစာကို ရွေးချယ်စားသောက် စရာမလိုဘဲ ပုံမှန်စားသောက်ခြင်းဖြင့် ပျော်ရွှင်၊ ကျန်းမာပြီး စိတ်ချမ်းသာမှုကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ .
သို့သော်လည်း ကျွဲ/နွား၊ သိုး၊ မြင်း စသည်တို့သည် နူးညံ့သော အဟိတ်တိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်ကြပြီး လူသားတို့ အပေါ် အဘက်ဘက်မှ အကျိုးကျေးဇူးပြုနေကြသည်။ မိမိတို့အသက်ရှင်သန်မှုအတွက် ၄င်းတို့အား စားသုံးမှုမှာ မလိုအပ်သည့် ညဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှုကို ပြုလုပ်သကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ မိမိတို့၏အသက်ရှင်နေထိုင်မှုအတွက် တစ်ပါးသူအား နာကျင်ခံစားစေခြင်းကို ရှောင်ရှားခြင်းသည် မိမိကိုယ်ကိုဆင်ခြင်သတိပြုခြင်းနှင့် တစ်ပါးသူ အပေါ် စာနာသနားမှုတို့ကို တိုးပွားစေပါသည်။ .
မိမိသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သော်လည်း တရားအားထုတ်ပွားများခြင်းနှင့် တရားစခန်းတို့တွင် လာရောက် ကျင့်ကြံအားထုတ်လို့ ရနိုင်ပါသလား။ ?
လူသားတိုင်းလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတစ်လျောက်လုံး လက်ခံယုံကြည်ခဲ့သည့် အယူအဆ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ တရားအားထုတ်စခန်းသည် မည်သည့်ဘာသာဝင်တိုင်းကိုမဆို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ တရားအားထုတ်စခန်းသည် မည်သူ့အပေါ်မှ ဘက်လိုက်မှု/ ခွဲခြားမှု မရှိဘဲ လူသား အားလုံး အဆုံးမရှိသော ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာခြင်းကို ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ .
ထို့ပြင် တရားအားထုတ်ပွားများခြင်းဖြင့် လူသားတို့၏ လက်ရှိနေ့စဉ်ကျင့်ကြံနေသော အတွေးအခေါ်၊ သိပ္ပံ ပညာရပ် နှင့် ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု သဘောတရားတို့ထက် ပိုမိုသာလွန်စွာ တွေးခေါ်နိုင်သည့် စွမ်းရည်ကို ရရှိစေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ တရားအားထုတ် ပွားများခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့ နေရာအနှံ့အပြားရှိ လူသားအားလုံး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကောင်းမွန်သော စိတ်ရင်းစေတနာတို့ကို အပြန်အလှန် ထားရှိစေနိုင်ပါသည်။ .
တရားအားထုတ် ပွားများမှုကို ကျင့်ကြံရာတွင် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန် အချက်များ ရှိပါသလား။ ?
(1)လက်ပတ်နာရီများ၊ ကျောက်မျက်ရတနာများ၊ မျက်မှန်များနှင့် ဦးထုပ်ဆောင်းခြင်း/ခေါင်းပေါင်းခြင်း တို့ကို ရှောင်ရှားကာ သက်သောင့်သက်သာရှိပြီး ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ကိုက်ညီသော အဝတ်အစားများကို ဝတ်ဆင်ရမည်။ မိမိ၏ ခြေထောက်များကို သက်သာအောင်ထားရမည်။ (ဖိနပ်ချွတ်ထားခြင်း(သို့) သက်သောင့်သက်သာရှိသော ဖိနပ်ကို စီးခြင်း)။ သင်၏ ခြေ၊ လက် အစိတ်အပိုင်းများကို လေစိမ်း မတိုက်ခတ်နိုင်ရန် သတိပြုပါ။ .
(2) မိမိအား စိတ်အနှောင့်အယှက်ကင်းဝေးစေမည့် စိတ်ငြိမ်အေးချမ်းသည့်နေရာထိုင်ခင်းကို သတ်မှတ်ရမည် (အပြင်တွင်ဖြစ်ပါက လေတိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ)။ အကယ်၍ ပြတင်းပေါက်များ ရှိနေပါက လေကောင်းလေသန့် ရရှိနိုင်ရန် ဖွင့်ထားပါ။ .
(3)တရားအားထုတ်ခြင်းကို ညီညာပြန့်ပြူးသည့် မျက်နှာပြင်ရှိသော ထိုင်ခုံပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊ အိပ်ရာပေါ် တွင်ဖြစ်စေ ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်သည်။ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ဖြစ်ပါက ကြာရှည်စွာ တရားအားထုတ် နိုင်ရန် ကူရှင်ပြား(သို့) စောင်တစ်ထည် ခင်း၍ ထိုင်ရမည်။.
(4) အကယ်၍ အလွန်အမင်းစိတ်ထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်း (လွန်စွာဝမ်းနည်း ပူဆွေးနေခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ဒေါသထွက်ခြင်းများ) ဖြစ်နေပါက တရားအားထုတ်မှုကို ဆက်လက်မပြုလုပ်ပါနှင့်။ မိမိ စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင်ထားပြီးမှ ဆက်လက်တရားထိုင်ပါ။ .
(5) အလွန်ဆာလောင်ခြင်းနှင့်အလွန်ပြည့်အင့်ခြင်းတို့သည် တရားအားထုတ်ပွားများမှုကို မကောင်းသော သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ .
(6)ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင့် ကလေးမွေးဖွားပြီးသူများလည်း ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပါက တရား အားထုတ်မှုကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ .
(7) တရားအားထုတ်ပွားများမှု ပြုလုပ်ရန် စတင်သည့်အချိန်တိုင်း အောက်ပါအချက်များကို သတိပြုရမည်- :
(a)ရုတ်တရက် ဆူညံသံများ (သို့) အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့် အသံများ ကြားရပါက စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင်ထားပါ။ ;
(b) ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းများမဖြစ်ပါနှင့်။ စိတ်ကို ပေါ့ပါးစေပြီး ငြိမ်းချမ်းအောင် ထားပါ။ .
(8) မိုးချုန်းခြင်း၊ လျှပ်စီးမုန်တိုင်းများဖြစ်ပွားခြင်း၊ သို့မဟုတ် အလွန်ဆိုးရွားသည့်ရာသီဥတု အချိန်ကာလများတွင် တရားအားထုတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်၊ ထို့ပြင် မြူနှင်းထူထပ်ခြင်း၊ မြူဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆီးနှင်း ထူထပ်နေသော မနက်အစောပိုင်းအချိန်များတွင် ပြင်ပတရားအားထုတ်မှုကို မပြုလုပ်ပါနှင့်။ .
(9) တရားအားထုတ် ပွားများမှု ပြီးစီးပါက အရေးကြီးသည့် လေ့ကျင့်ခန်းများဖြစ်သည့် လှုပ်ရှားမှုများ (လက်များကို အတူတကွ ပွတ်တိုက်ခြင်း၊ မျက်နှာကိုပွတ်တိုက်ခြင်း၊ ဦးခေါင်းမှခြေချောင်းအထိ လက်ဖြင့် နှိပ်နယ်ပေးခြင်း) တို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါ။ ထို့ပြင် မိမိ၏လက်နှင့် မျက်နှာအား ရေအေးဖြင့် မဆေးကြောမီ အချိန်ခဏ ယူပါ။ .
(10) မိမိကိုယ်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းသည် ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်စေပါသည်။ ထိုအရာသည်ပင် တရားအားထုတ်နေစဉ် ရောဂါအပေါ် အာရုံစူးစိုက်မှု လျော့ နည်းစေသည့် အချက်ပင်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုအား အာရုံစူးစိုက်စေပြီး အထောက်အကူ ပြုစေပါသည်။ အတွေ့အကြုံနုနယ်သေးသော တရားအားထုတ်သူအချို့သည် ခါးနာခြင်း ကဲ့သို့သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်သောင့်သက်သာ မရှိမှုများ ခံစားရနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း မပျက်မကွက် ဆက်လက်တရားအားထုတ်ပြီး ရက်အနည်းငယ်ကြာပါက အဆိုပါ နာကျင်မှုတို့မှာ ပျောက်ကင်းသွား ပြီး ပုံမှန်အခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ .